I-Cabana Evaliweyo kwi-Condominium Exclusive Exclusive Lagoa Access
Inkulumbuso yaseAmazon, iNetflix. I-Red Cabana yacatshangelwa ngokweenkcukacha ukuqinisekisa ukuhlala okukhumbulekayo. Ijikelezwe yindalo edlamkileyo kunye nokuzola okukhethekileyo kwisandi seentaka. Umoya womoya ehlotyeni kunye nesifudumezi se-oyile ebusika. Isithuba singaphakathi kwe-Maranata II Condominium kunye nokufikelela okukodwa kwichweba lase-Ibiraquera kunye nokutshona kwelanga okuphefumlayo. Iilwandle ezikufutshane, iRosa Norte kunye ne-Ouvidor, ziyimizuzu emi-5 ngemoto.
Indawo yenzelwe ukuqinisekisa intuthuzelo yakho kunye noxolo, indawo yokusabela phakathi kwendalo. Ikhabhinethi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukuze uphile iintsuku zoxolo noxolo kwelinye lolona lwandle luhle emhlabeni.
Indawo yaseCampo Duna, apho i-Maranata condominium ikhona, inokhetho oluninzi lweemarike kunye nemithi yeziqhamo. Unokonwabela enye yeelwandle ezintle kakhulu kwihlabathi okanye ujabulele i-condominium kunye nechweba elihle lase-Ibiraquera.
Ndiyakuthanda ukwamkela abantu kunye nomsebenzi wokufumana nokwenza amaxesha akhumbulekayo kubomi babantu uyandikhuthaza. Ndifuna umzuzu wakho ube wodwa kwaye ube ngowakho wedwa, kodwa ndiya kuhlala ndikhona ukuze ukuhlala kwakho kungakholeleki.
Ndiyakuthanda ukwamkela abantu kunye nomsebenzi wokufumana nokwenza amaxesha akhumbulekayo kubomi babantu uyandikhuthaza. Ndifuna umzuzu wakho ube wodwa kwaye ube ngowakho wedwa, k…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cidade Garopaba